“अब राप्रपालाई कसैले रोक्न सक्दैन” :- अध्यक्ष लिङ्देन ! – Nepal Online Khabar
फागुण २१, २०७८ शनिबार 51
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टीको बैचारिक मान्यतालाई त्यागेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
न्यूज २४ सँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङ्देनले आफूमाथि प्रवित्तिगत प्रश्न उठाउदै कमल थापा बाहिरीनु नै उहाँको गलत मनासाय भएको बुझन सकिने बताए ।
राप्रपाले प्रजातान्त्रिक विधिमार्फत महाधिवेशनमा नेतृत्व चुनिरहेको बेला थापाले पार्टी छोड्नु नै उहाँको पार्टी सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलित भएको बुझ्न अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरे ।
‘हामीले पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध छौँ । उहाँले पार्टीको वैचारिक मान्यतालाई त्यागेर नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीलाई खरव प्रवित्तिको भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘नेपालको समकालीन राजनीतिमा राप्रपा पार्टीमात्रै यस्तो पार्टी भयो । जसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको चयन गर्यो।’
‘समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व गरेको पुस्ता छ । जो पुस्तान्तरण र परिवर्तन गर्ने बेला भयो भनेर आवा उठिरहेको छ । त्यो पुस्ताको पनि राप्रपाले नेतृत्व गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।
राप्रपाको संस्थापक तथा अन्य सिनियर नेताहरु आटिरहेको स्थितिमा कमल थापा नआट्नु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उहाँले पार्टी छोड्दा दुख मान्नु सिवाय अरु केही नभएको बताए ।
अधिवेशन हुँदै गर्दा निर्मल निवासको मिलेमतोमा राजेन्द्र लिङ्देनले थापालाई अप्ठ्यारो पारेर भड्काउने काम भयो रे भन्ने चर्चा छ नी ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘बिचरा म गाउँबाट आएको साधारण आम मानिसको छोरा । मैले त्यत्रो भड्काउन कहाँ सक्थेँ। उहाँ आफैले राज संस्था वा राजाको सहयोग छ ।
मलाई नै उहाँले उठ्नु भन्नु भएको छ भन्दै टिभी कार्यक्रमहरुमा भन्दै हिड्नु भएको थियो । मैले त्यस्तो कुरा गरेको पनि थिइन । र अपेक्षा पनि गरेको थिइन । मैले कार्यकर्ताको बलमा पार्टीको अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा परिवर्तनको नेतृत्व गरेर अगाडी आएको हुँ । जसका लागि कार्यकर्ताको साथ प्राप्त गरेँ ।
नेतृत्व परिवर्तन भयो । यसको अर्थ उहाँहरुलाई पाखा लगाउने नियत होइन । ’अध्यक्ष लिङ्देनले कमल थापा अर्को पार्टीमा जाँदैमा कुनै फरक नपर्ने बताए । थापाको श्रापलाई आशिर्वादमा परिवर्तन गर्न आफूहरुले चाहेको बताएका छन् । अब राप्रपा कुनै पनि हालतमा अघि बढ्ने र अब राप्रपालाई कसैले रोक्न नसक्ने अध्यक्ष लिङ्देनको जिकिर छ । -न्यूज २४
Prevझ्यालमा बालुवाका बोरा राखेर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पत्रकार सम्मेलन, के-के भने ?
Nextम्यादी प्रहरीलाई २४ हजार तलब, पोसाक र खाजा खर्च पाउने !